Nnwale OCD | Chọpụta ma ọ bụ OCD, ụdị, na ogo ya
Banyere Brad, Onye guzobere anyị
Nnwale OCD anyị
Nnwale Ule OCD
Ụdị ule OCD
Ihe niile gbasara OCD
Were ule OCD
Chọpụta ma ọ bụ OCD, ụdị, na ịdị njọ
Ọnụ ọgụgụ OCD
nke ndị bi n'ụwa na -ebi na OCD
O yikarịrị ka ndị otu ezinụlọ ndị ọzọ nwere ọnọdụ ahụ na akụkọ ihe mere eme ezinụlọ nke ọnọdụ ahụ -
1 n'ime 4 (25%)
75.8% enwere ike inwe nsogbu nchekasị ọzọ, gụnyere:
Nchegbu Ọha / ỌGWỤ
Nchekasị zuru oke / GAD
Mwakpo ụjọ / nchegbu
156,000,000 ndị mmadụ n'ụwa niile
na -emetụta agbụrụ niile, agbụrụ niile
na -agbasakwa n'etiti nwoke na nwanyị
Ndekọ ọnụ ọgụgụ USA
Ndị okenye na -ata ahụhụ site na OCD
ụmụaka na -ata ahụhụ site na OCD
Ọnụ ọgụgụ OCDTest.com
45,000 + ndị mmadụ
Site n'akụkụ niile
Dị ka onye ibe ibe ya na-enwe Nsogbu Nsogbu Ihe karịrị afọ iri, ọ bụ olile anya m na webụsaịtị a na-akwado gị site n'inweta olile anya, idoanya na nghọta ka esi akwụsị okirikiri OCD.
Onye guzobere OCDTest.com
Kedu ihe bụ ọgba aghara na -agwụ ike?
Nsogbu na-agwụ ike (OCD) bụ nsogbu nchekasị nke nwere akụkụ abụọ: Obsessions and Compulsions. OCD bụ ọrịa na -adịghị ala ala, mkpụrụ ndụ ihe nketa nke na -ebute oke nhụjuanya mgbe achọpụtaghị ya nke ọma ma gwọọ ya. OCD nwere ike imetụta mmadụ n'otu n'otu n'uche, mmetụta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Mgbaàmà nke OCD gụnyere ihe gbasara mmadụ, nke a na -amakarị na ọ bụ echiche na -akpaghasị achọghị nke a na -enweta dị ka echiche ugboro ugboro, onyonyo, ma ọ bụ mkpali ndị na -adịghị mma ma na -ebute nsogbu na ahụ erughị ala.
Nnwale Subtype OCD anyị bụ ule ụdị OCD zuru oke na ịntanetị. Ebumnuche anyị bụ imepụta nnwale nke ga -egosi n'ụzọ doro anya ụdị OCD dị na ruo ogo ha dị. Nnwale a nwere ajụjụ anọ n'otu ule, ngụkọta ajụjụ 4 na ule subtype a.
Were ule OCD:
OCD Ule Nnwale Ule OCD Ụdị ule OCD
Ahụhụ na-agwụ ike (OCD) Nnwale & nyocha onwe onye
Ebe nrụọrụ weebụ anyị na -enye ọtụtụ nhọrọ nnwale OCD, gụnyere OCD Severity Test, OCD Intrusive Thoughts Test, Ụdị OCD Test, na Subtypes nke OCD Ule. Ezubere ule nrịba nke OCD iji nyochaa ogo na ụdị ihe mgbaàmà OCD na ndị ọrịa nwere OCD. Tupu ịmalite ule ahụ, gụọ nkọwa na ihe atụ nke "Obsessions" na "Mmanye." Were ule siri ike nke OCD.
Na mgbakwunye, anyị na -enyekwa ụdị nnwale OCD, nke ga -enyere aka ịmata ụdị OCD ị nwere ike ịrịa. Nnwale a nwere mkpokọta 38 subtypes nke OCD. Were ule ụdị OCD.
Omume dị iche iche na -emegharị ugboro ugboro, achọghị, echiche na -akpali akpali, onyonyo, ma ọ bụ mkpali ndị na -adịghị mma ma na -ebute nhụjuanya na ahụ erughị ala. Isiokwu enweghị mmasị maka ndị nwere OCD nwere ike ịbịa n'ụdị dị iche iche; germs, order, symmetry, egwu mmerụ ahụ, echiche ime ihe ike na onyonyo, egwu mmekọahụ, okpukpe na omume ọma. N'ọnọdụ niile, echiche ndị a na -eme ka ụjọ jide onye nwere OCD n'ihi na ha na -emegide njirimara ha wee tinye obi abụọ na ejighị n'aka na ndụ ha.
Iji belata mmetụta na -adịghị mma nke nchekasị, ụjọ, ihere, na/ma ọ bụ ịkpọasị site na Nrụgide, a na -eme ihe ma ọ bụ omume iji belata ma ọ bụ wepụ nsogbu ahụ. A na -akpọ nke a mmanye. Mmanye, ma ọ bụ omume ọ bụla iji zere ma ọ bụ belata nchekasị ma ọ bụ ikpe ọmụma, nwekwara ike ịbịa n'ụdị n'ụdị; nhicha, ịsa, ịlele, ịgụta ihe, tics, ma ọ bụ omume uche ọ bụla na -emegharị ma ọ bụ na -enyocha uche iji chọpụta ma mmadụ mere ma ọ bụ nwee ike ịme echiche ọ bụla.
Kedu ka OCD na OCD si adịkarị?
Nnyocha nke Healthtù Ahụ Ike Ụwa mere ka amata na OCD so n'ime, ọrịa iri na -ebute ụzọ, nke na -ejikọ oke nkwarụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. OCD aghọọla ọrịa mgbaka nke anọ nke anọ na -ebutekarị ọrịa na ihe nke iri kacha ebute nkwarụ gburugburu ụwa. Na United States naanị enwere ihe karịrị nde mmadụ atọ na -ata ahụhụ site na OCD (International OCD Foundation, 10).
Gụkwuo gbasara nkọwa OCD.
Usoro okirikiri OCD dị okirikiri, na-agbanwe site n'echiche na-akpali agụụ mmekọahụ (ịhụ n'anya), na-akpalite ụjọ, obi abụọ ma ọ bụ nchekasị, na-eme ka ọ dị mkpa ime ihe iji nweta ahụ efe pụọ na ụjọ na nchekasị nke uche na-emepụta nke na-ebuteghachi echiche mbụ. A na -emepụta nsogbu cyclic n'ihi na mbelata ahụ erughị ala na nhụjuanya site na ịmanye mmanye bụ naanị nwa oge ruo mgbe a ga -ahụta uche ọzọ.
Tụkwasị na nke a, ibelata nchekasị ahụ na -enyere aka mee ka echiche mbụ ahụ sie ike ma sie ike. Ya mere, a na -emeghachi omume ma ọ bụ omume mbụ nke belatara nhụjuanya na mbụ iji belata ahụ erughị ala ahụ, wee bụrụ nke a na -eme ka ọ bụrụ mmanye. N'aka nke ya, mmanye nke ọ bụla na -eme ka ahụ dị njọ, nke na -eduga n'ịmekwu iwu nke mmanye ahụ. N'ihi ya, ajọ usoro nke OCD na -amalite.
Site na Blog
Ihe ịrịba ama nke OCD na ndị okenye
Kedu ihe bụ OCD? Dabere na International OCD Foundation, OCD bụ “nsogbu ahụike nke uche nke…
Enwere ule OCD dị n'ịntanetị maka nwa m?
Nsogbu na-agwụ ike, nke a na-akpọkarị OCD, bụ neuropsychiatric /...
Ihe 17 ị kwesịrị ịma gbasara OCD
Anyị niile nwere omume pụrụ iche nke anyị, nkwenkwe ụgha, ma ọ bụ obere ememme na -adịghị emerụ ahụ anyị na -ebu ...
Mweghachi na -amalite ebe a, were ule OCD
Ka na -ajụ ma ọ bụ na OCD? Chọpụta taa.
C 2021 ocdtest.com. Ikike niile echekwabara.
Biko tinye nkọwa n'okpuru
Dị ka ndị ibe OCD na -ata ahụhụ, ọ bụ nkwa anyị na -agaghị anabata gị spam. Ebumnuche anyị n'inweta ozi a bụ ịga n'ihu na -enye gị akụrụngwa ndị ọzọ iji kwado gị ịpụta na okirikiri OCD. Ị ga -enwe ike ịpụ na nke a n'oge ọ bụla.
URL dị ugbu a*
Họrọ otu n'ime ule subtype OCD 38 n'otu n'otu ka ị were*
Họrọ otu n'ime ule subtype OCD 38 n'otu n'otu ka ị were1 - Nyochaa ule OCD2 - Nnwale OCD na -emerụ emerụ3 - Ngụ ule OCD4 - Nnwale OCD dị adị / nkà ihe ọmụma5 - Nnwale / Nnwale OCD6 - Ịgba afa OCD7 - Nnwale OCD na -emerụ ahụ8 - Ahụike OCD / Hypochondria Test9 - See ma mee nnwale OCD10 - OCD idina ụdị onwe - ule hOCD11 - Nnwale OCD nke Inest12 - Echiche na -adabaghị adaba Nnwale OCD13 - Nnennen ziri ezi / Nnwale OCD ziri ezi14 - Nnwale OCD nke Ime Anwansi15 - Nnwale OCD nke uche / nke mmetụta uche16 - Uche ọgụgụ OCD Ule17 - Nnwale OCD nke omume18 - Achọrọ ịma ule OCD19 - Nnwale ọrịa ọrịa olfactory20 - Nnwale OCD Paranoia21 - Pedophilia OCD - ule pOCD22 - Nnwale OCD zuru oke23 - Nnwale OCD nwa oge24 - Nnwale OCD mgbe a mụsịrị nwa25 - Nnwale OCD dị ọcha / dị ọcha26 - Mmekọrịta OCD - rOCD Ule27 - Nnwale OCD / Scrupulosity Test28 - Nnwale OCD nke ọrụ29 - Nnwale ule OCD30 - Schizophrenia / Egwu ịga Crazy OCD31 - Nnwale OCD na -emerụ onwe ya ahụ / igbu onwe ya32 - Nnwale OCD nke Mmekọahụ33 - Nnwale OCD nke Mmekọahụ34 - Nnwale OCD nke Nchegbu Ọha35 - Nnwale OCD Somatic / Sensorimotor36 - Nnwale OCD nke nkwenkwe ụgha37 - Nnwale OCD nke symmetry / ịdị n'usoro38 - Echiche na -eme ihe ike / na -eme ihe ike Nnwale OCD
Nweta nsonaazụ gị site na email